Ny fanadihadiana vao haingana koa dia mampiseho ny fiovaovana goavana amin'ny elanelam-pandrefesana larval, ary ny elanelam-piaramanidina avo lenta kokoa noho ny taloha (ohatra 100m ka 1km mankany 30 km). ref Ohatra, ny elanelana manasaraka ny faritry ny haran-dranomasina dia ny 5-15km ary ny fizakan-tena dia mahazatra. ref Noho izany, tokony ho <15 km ny taham-pandrefesana miaraka amin'ny tahiry kely vitsivitsy. Ny firaiketana eo amin'ny karazam-bozaka dia matetika, na ho an'ny karazam-panafody amin'ny ankapobeny, noho ny famaritana mandritra ny androm-piainana. Ho an'ny ankamaroan'ny karazam-bary efa nodinihina dia nampiseho ny fifandraisana amin'ny demografika izay naseho teo amin'ny kirany hatramin'ny folo kilometatra ambaratonga, fa tsy tamin'ny mizana kilometatra na mihoatra. Ity lozam-pifaneraserana misy eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana ny tenany sy ny fifandraisana eo amin'ny vatohara dia misy fiantraikany amin'ny habetsaky ny MPA ao anaty tambazotra iray, ary mety hanondro fa na ny MPA kely ihany aza dia mety manohana ny tenany. Fanampin'izany, ny fikarohana vao haingana momba ny Haran-dranomasin'ny Barrage Lehibe dia maneho fa ny tambajotra azo antoka azo antoka dia afaka mandray anjara lehibe amin'ny famenoana ny isan'ny trondro ao anaty tahiry sy amin'ny haran-dranomasina akaiky. ref
Ny rano mikitoantoana sy ny fiantraikan'ny ala honko dia mety hampihena ny fihenan-tsakafon'ny haran-dranomasina amin'ny fivalozana. Ho fampahalalana bebe kokoa sy ny tari-dalana momba ny faharetana sy ny ala honko Mitantana ny ala honko amin'ny fahantrana amin'ny fiovan'ny toetrandro.
Ireo tarehimarika ireo dia maneho fa ny fifandraisana eo anelanelan'ny fandriana sy ny ala honko ary ny haran-dranomasina dia mety hisy fiantraikany amin'ny haben'ny trondro sy ny habetsahan'ny trondro (ohatra ny fako sy ny parrot). Top - Manana Trano: Ny taratasy mena "A" dia maneho ny zana-pivarotan-jwana, rehefa tonga any amin'ny habeny iray ao anaty fandriana iray, mankany amin'ny ala honko (B). Ny ala honko dia toy ny toeram-ponenan'ny zana-pokontany mialohan'ny trondro miala amin'ny vatohara (C), ary ny biby biomass dia manatsara kokoa ny haran-dranomasina (C), ny tandroka (D), ary Montastrea reefs (E). Ny trondro sasany (F), toy ny karazana papango sasany, Scarus guacamaia, dia miankina amin'ny ala honko ary tsy hita raha tsy misy ny honko. Ambany - Tsy misy ala honko: Raha tsy misy ny ala honko, dia miala mivantana avy eny amoron-dranomasina mankany amin'ny haran-dranomasina ny trondro ary mipoitra amin'ny haran-dranomasina (G) amin'ny haben'ny lanjany kokoa ary amin'ny lanjany ambany kokoa, noho izany dia mora kokoa amin'ny fandrobana. Novaina avy amin'i Mumby et al. 2004. Loharano: Peter Mumby
Ho an'ny tari-dàlana farany momba ny fampidirana ny fitrandrahana larval sy ny hetsiky ny hazandrano haran-dranomasina ho an'ny fananganana tahirin-dranomasina, kitiho eto.
Horohoron-tany Larval sy Hetsika momba ny trondro misy vatohara, ary ny fiantraikany amin'ny fanorenana tambajotra an-dranomasina
Ny famolavolana ireo tambajotra voaaro hiaro ny fiarovana ny fiovaovan'ny toetr'andro
Famolavolana tambajotra manan-danja miaro ny seranan-tsambo mba hanatrarana ny fandrosoana amin'ny sehatry ny fitrandrahana, ny zavamananaina isan-karazany, ary ny fikorontanan'ny toetrandro amin'ny tontolo iainana tropical:
Fitsipika momba ny biofisika momba ny famoronana tambajotra marefo amin'ny sehatry ny fiarovana ny maria mba hampidirana ny jono, ny zavamaniry sy ny zavamananaina ary ny fikorontanan'ny toetrandro ao amin'ny Coral Triangle
Ny Siansa ao amin'ny tahirin-dranomasina
NOAA Foibe nasionalin'ny fiarovana ny Marine
Fitsipi-panorohana ny MPA Network Design
Fikojakojana ny fikolokoloana fisakafoanana: Boky Torolàlana ho an'ny mpitantana marin-drano mpiaro an-dranomasina